Njem, Nlegharị | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Travel, Tourism
Kedu oge ogologo Boulevard Ring? Ego ole ka boulevards na mgbanaka a gụnyere?
Kedu oge ogologo Boulevard Ring? Ego ole ka boulevards na mgbanaka a gụnyere? Ebe 10 na 10 Boulevards The Boulevard Ring bụ usoro na-aga n'ihu n'ihu n'okporo ámá dị na Central Administrative District nke obodo Moscow, nke nwere iri ...
Kedu etu ebe burqa si puta?
Kedu etu ebe burqa si puta? Ee e, nke a abughi ihe mkpuchi ihu, ma ọbụna uwe elu dị ogologo nke nwere ogologo uwe aka nri, a na-atụba ya n'isi na-ekpuchi ọnụ ọgụgụ ahụ dum site n'elu ...
Kedu ihe a maara banyere akụkọ ihe mere eme nke ndị na-emepụta kateti?
Kedu ihe a maara banyere akụkọ ihe mere eme nke ndị na-emepụta kateti? Dị ka ndị na-eme nchọpụta si kwuo, mmepụta nke ụmụ bebi pụtara 40 ọtụtụ puku afọ gara aga, ọ bụ naanị na mbụ e jiri ha mee ihe ọ bụghị maka ntụrụndụ, kama maka ememe anwansi. More ...
Ebee ka Transylvania dị?
Ebee ka Transylvania dị? Romania oh, ihe niile smart, ama egwu, mepee Internet ma gosi). Ị na-ege ndị agbata obi gị ntị - M si Moldova, anyị bụ ndị agbata obi na Romania. Transylvania bụ mpaghara Rom, nke dị n'etiti ...
Isi obodo Italy ...
Isi obodo Italy ... Kemgbe 1871 nke afọ, n'okpuru Victor Emmanuel? Olee mgbe cometali zukọtara? Isbọchị mmalite Rome ka amara ụbọchị kacha nso (nke ajụjụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme pụrụ iche) - 21 nke Eprel 753 nke afọ…
Ebe Mmiri Victoria Basin si malite?
Isi mmalite nke Ọdọ Mmiri Victoria? Mmalite nke Lake Victoria bụ tectonic Lake Victoria bụ ọdọ mmiri nke abụọ kacha ibu na mbara ụwa. Achọpụtara ya na 1858 onye njem Bekee na onye nyocha Africa John…
Gịnị mere na US na-ekwu na ndị uweojii na-ekpuchi kpakpando na ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ụzarị?
Gịnị mere na US na-ekwu na ndị uweojii na-ekpuchi kpakpando na ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ụzarị? USA-eto kak izwestno federazija, i kazhdij stat imeet swojo praisselstwo i swoju konstituziju i ... dabere na ọkwa ...
Ebee ka ọ ga-adị na pusi ụwa nke Munich, na mba dị aṅaa?
Ebee ka ọ ga-adị na pusi ụwa nke Munich, na mba dị aṅaa? Kwekọrịta kpamkpam na akara ngosi. Munich dị na Germany. Ọ ga-akara gị mma ịnọdụ ala n'Intanet ụbọchị niile, ma mụọ ihe ọdịdị ala! ...
Kedu ihe mere na Tian-an-men Square?
Kedu ihe mere na Tian-an-men Square? Zọpụtara mba, ma mee ka ọ baa ọganihu. Ndị a niile na-akpata ọgba aghara kwesịrị ikwusi. Ebe nile ... Ọ bụrụ na Kọmitii Mberede anaghị agwọ snot, mgbe ahụ, ihe niile ga-abụ ihe ...
ugwu dị n'ebe ugwu merek
Ugwu na North Amerek Appalachians nke Colorado *** ugwu Rocky (English Rocky Mountains), na Cordillera usoro North America, na n'ebe ọdịda anyanwụ nke USA na Canada, n'etiti 60 na 32 na. sh. Ebe na map ...
Ebee ka obodo Yellow Yellow dị?
Ebee ka obodo Yellow Yellow dị? Mpaghara Dnipropetrovsk, Ukraine na mpaghara DnipropetrovskAha obodo ahụ nwere njikọ chiri anya na osimiri Zlta, aha ya dị ka mmiri nke mmiri, nke ngwaahịa nke oxidation iron ores na-ese. Ndagwurugwu ...
Ebee ka ihe ala di - Valdai na gini bu ala o buru?
Ebee ka ihe ala - Valdai, na kedu ala bụ Valdai obodo (ya na 1770) na Russia, nke mpaghara mpaghara, etiti nchịkwa mpaghara Valdai nke mpaghara Novgorod. Onu ogugu nke 18,1 puku ...
Elista ebee ka ọ dị?
Elista ebe ọ nọ? Ọ bụrụ na i si na Moscow, ị gaghị aghọta), mana ọ bụrụ na ị kuziri mmụta mmụta ala na ụlọ akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-ahụ Kalmykia na atlas) Elista bụ isi obodo. Mari Region http: //www.gorod-elista.ru / ...
Ebee ka obodo Gomel dị?
Ebee ka obodo Gomel dị? Na Belarus. na mpaghara Gomel Nke a bụ Belarus. Lukashenka na Belarus Belarus. na Belarus! Nke a bụ azịza ziri ezi) Na Belarus, ọ bụghị n'ebe dị anya! Na Belarus. Ọ dịghị anya ...
Na onye maara ebe obodo Borisoglebsk
Ma onye maara ebe ị ga-ahụ obodo Borisoglebsk Borisogle # 769; obodo bsk (na 1779) na Russia, ebe nhazi nke Borisoglebsky district nke mpaghara Voronezh. Population 68,2 gị. (2005). Obodo ahụ dị n'akụkụ aka ekpe nke osimiri ...
Kedu ihe mere eji ewu na uwe elu nke Samara?
Gini mere ewu ji di na uwe Samara? Na oge mbụ, ekwuputara uwe agha nke obodo Samara na "Famous Coat of Arms" nke 1729-1730 nke 8 nke March 1730 nke afọ emume nke obodo nke Alaeze Ukwu Russia, gụnyere Samara. Na ...
Ònye bụ Albert Einstein na gịnị mere o ji pụọ maka America?
Ònye bụ Albert Einstein na gịnị mere o ji pụọ maka America? site n'aka ndị Pskov ya, anyị, nna ochie, ndị iro ya zuru ohi! ya onwe ya agaraghị ahapụ, n'ihi, na akụ na ụba, na Cavo? German ...
N'ime afọ ole ka Trafalgar Square pụtara?
Afọ ole ka Trafalgar Square pụtara? 1820 Trafalgar Square, nke dị na saịtị nke ụlọ ochie ochie, bụ Central square nke London, na-ejikọ ọtụtụ okporo ụzọ London: Pall Mall, Strand, Charing Cross na Whitehall ...
Kedu onye nkịta a bụ? Kedu aha aha ncheta ahụ?
Dognye bụ nkịta a bụ nke a? Gini bu aha ihe ncheta a? mumu ... Ihe ncheta a ka enyeere umu mmadu nke anaghi enwe ulo Na ulo nke Mendeleevskaya metro mepere ihe ncheta nke Sympathy. Ugbu a ndị ọla kọpa zutere ndị njem nke ụzọ ụgbọ oloko ...
Kedu ihe ndị dị na Australia na isi obodo ha? biko zaa
Kedu ihe ndị dị na Australia na isi obodo ha? biko zaghachi Australia nke a bụ ọnọdụ nke. Isi obodo bụ Sydney. Australian Union-Canberra, Tasmania bụ obodo Australia nke dị n'àgwàetiti nke otu aha na 240 km n'ebe ndịda nke ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,398.